कथा- दाग :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
कथा- दाग सरु पोखरेल
” ओ हो छपक्कै सेतो आइसकेछ । कपाल पनि सबैतिर सेतो भैसकेछ । सर्न त सर्दैन ” उसलाई देख्ने वित्तिकै आँखीभौं खुम्चयाउँदै मिराले भनी ।
“सर्दैन सर्ने भए त यसका भाइ बहिनीलाई पनि सर्दो हो नी सँगै खाने बस्ने गर्दा । ” उसकी आमाले मसिनो स्वरमा भनी ।
“अरु केही रोग त छैन नी ।” ।
“छैन कहाँ हुनु यही छाला विग्रेको मात्रै हो ।”
“ओइ काम त सबै गर्न सक्छेस ?” बरण्डाको छेउमा नङ टोकेर उभिइरहेकी केटीलाई हेर्दै फेरी मिराले भनी
“किन सक्दिन सबै गरिहाल्छे नी” उ भन्दा पहिला आमा नै बोली ।
“स्कुल जाने गरेकी छस् ?”
“हृयाँ बसेर त पढ्न जान पाइदैन, मलाइ सार्‍है गार्‍हो भएर तँलाइ मगाएको हो ।”
“जान्न पछि मिल्यो भने पढ्दा भैहाल्छ नी” फेरि आमा नै बोली ।
मिराले उसलाई तलदेखि माथिसम्म नियाली, उसको शरीरमा दश ठाउँमा खुम्चिदै उचालिएर तिघ्रासम्म पुगेको पोलिष्टरको एकसरो जामा छ । पाइतालाको पछिल्लो भागको टेक्ने खिइएर भुइ देखिएको चप्पल लगाएकी छ । माघको जाडोमा पनि न उसको शरीरमा स्वेटर छ न पछ्यौरा नै ओढेकी छ । जाडोले उसको टाटेपाटे छालाको छिद्र ढाकेका रौंहरु ठाडा भएकाछन् ।
“कसरी दिने त पैसा”
“महिनाभरी हजार दिनु भैहाल्यो”
“हजार त महंगो भयो, खान लगाउन दिनै पर्‍यो, यस्तो दुवी भएकी सद्धे पनि त होइन ।”
“काम त गरिहाल्छे नी महिनाको आठसय दिनु त्यो भन्दा कममा त हुँदैन ।
आठ सयमा उनीहरुको सहमति भयो । बाटो खर्च लिएर आमा गई । ऊ आमा गएकै बाटोतिर हेरेर बसिरही ।
ऊ त्यसघरभित्र प्रवेश गरेदेखि एकाएक कामहरु थपिदै गए । उसले नयाँ घरमा आएपछि नयाँ नाम पनि पाइ ‘टाटे’ ।
“टाटे लुगा धो”
“टाटे भाँडा माझ”
“टाटे कुचो लगा”
“टाटे ………………. आदि ।
“काम त गर्दिरहिछ तर डर लाग्दी टाटे रहेछ है भाउजू, ……. है दिदी…………….. है आण्टी ।” घरमा आउनेहरुको प्रतिक्रिया उसलाई देखेपछि यस्तै हुन्थ्यो ।
“अर्को नपाउनेजेल हो । पछि त कहाँ राख्छु र ।” मिरा प्राय यही जवाफ दिन्थी ।
शुरुमा उसलाई पकाउने काम लगाइएको थिएन पछि पछि पस्किन मात्रै रोक भयो ।
“छ्या चिया लिएर आउँदा पनि हात देख्दै घिन लाग्दो” एक दिन उसको मालिकले भनेपछि उसले चिया पुर्‍याउन जानु नपर्ने भयो । यद्यपी चिया भने उसैले नै पकाउँथी ।
मालिक्नीको ठूलो पेट देख्दा सोच्थी । त्यहाँ भित्रको बच्चा कस्तो होला । छोरा हुन्छ की छोरी । त्यसको पक्कै पनि दाग हुँदैन आदि आदि । त्यो बच्चा जन्मिने सोचाइले पनि उ दंग पर्थी । मालिक्नी जागिर खान जाने भएकोले त्यसलाई खुवाउने, सुताउने, फूलाउने गर्दा बल्ल आफूलाई यो घर रमाइलो लाग्ने आशा उ भित्र थियो । उसले त्यो बच्चाको तिव्र प्रतीक्षा गरेकी थिई तर कहिले आउँछ भनेर मालिक्नीलाई कहिल्यै सोध्न भने सक्दिनथी ।
“मान्छे खोजेको खोज्यै छु । कति गार्‍हो पाउन हेरिस्योन सुत्केरी हुने बेला भैसक्यो । खै सर्न त सर्दैन भन्छन् । तै पनि बच्चालाई छुन त कसरी दिनु । यसो हजुरले पनि हुनेसम्म खोज्दिसेला है दिज्यू” मिराले फोनमा बोल्दै गर्दा उसका कानले सुने ।
उसले जड्याहा बाबु सम्झी महिनै पिच्छे आठसय लिन आउने आमा सम्झी । भोक र रोगले ग्रस्त भइ बहिनी सम्झी, आफ्ना सँगै खेल्ने साथी सम्झी । साथीलाई सम्भिmदा मैनाले कुनै दिन उसलाई भनेको पनि सम्झी ।
“सगुना तलाई त दुवी आएको छ त्यसैले पछि तेरो विहे हुँदैन होला है । ”
“त्यस्तो बिहे नभएर के भो त ” उसले कति सजिलै जवाफ दिएकी थिइ त्यतिखेर ।
उमेर बढ्दै जाँदा उसको दाग पनि बढ्दै गयो । दागले सँगै उब्जाएको घृणा पनि क्रमैसँग बुझ्न थाली उसले ।
भर्‍याङ्ग मुनी उसको ओच्छ्यान छ । बाहिरको पर्खाल छेउ जोडिएको थोत्रो ट्वाइलेट उसको लागि छुट्याइएको छ । तर घर भित्रका ओच्छ्यान र ट्वाइलेट सफा गर्ने जिम्मेवारी भने उसकै हुन्छ ।
घर भित्रको वाथरुम सफा गर्ने क्रममा उसले आफूलाई त्यहाँको ऐना अगाडि उभ्याएर हेरी । उसको गहुँ गोरो अनुहार हिउँ जस्तो सेतो दागले ठाउँठाउँमा छोपिएको छ । उसका मृगनयन आँखा, चुटुक्कको नाक, टम्म मिलेका दाँत त्यही दागका वरिपरि हराएका छन् । ती सबैको परिचय खोसेर सेतेा दुवीले उसलाई टाटेको रुपमा परिचित गराइदिएको छ ।उसको वाक्लो कपाल बुढी आइमाइको जस्तो ठाउँ ठाउँमा सेताम्मे देखिएको छ । ओठको आफ्नो रंग छैन सर्लक्कका हात खुट्टा फुस्रा र टाटेपाटे बनेकाछन् । उसले वाथरुममै उभिएर केही वेर नंग टोकी फेरि झसँग हुँदै बाथरुमको भित्ताका दागहरुमा हर्पिक खन्याएर घोट्न थाली । बाथरुमभित्र ऊ अरुबेला भन्दा बढी नै टोलाउछे । एक त उसको छालाको नेमेटिने दागलाई ऐनाले त्यहां छलर्ंग्याइदिन्छ अर्को वाथरुमको भित्ताका दागहरु उसैका हालबाट मेटिदै जान्छन् । ऊ सोच्दी हो उसको शरीरका दागलाई सफा गर्न पनि यस्तै हार्पिक र ब्रश भैदिएको भए उसले टाटे नाम पाउने थिइन होला ।
दिनहरु वित्दै गए । अचानक एकरात मिराको पेट साह्रदै दुख्यो । राति नै उसलाई हस्पिटल लगियो । भोलिपल्ट गुडिया जस्तै बच्ची लिएर आए उसका मालिक मालिक्नीले ऊ खुशी हुँदै मिराको छेउमा गई ।
“ओ टोटे छुन चाँहि न छो है” उमेशको बोलिले उ हच्की ।
दुई महिनासम्म तेल लगाउने मान्छे भएकोले उसले बच्चाको केही गर्नु नपर्ने भयो । ऊ बच्चीलाई टाढैबाट हेर्थी, जिस्काउथी, चाहेर पनि काखमा लिन हुन भने सक्दिनथी ।
ऊ बच्चीलाई दूध बनाउथी, बोतल सफा गर्थी, उसका दिशा पिशावका थाङ्ना कति घिन नमानी धुन्थी । बच्चीले हास्दा आफैसँग हाँसेको ठान्थी । मसिना औंला चलाउदा आउ भनेर इशारा गरेको बुझ्थी ।अनि सोच्थी हिड्न सक्ने भएपछि बहिनी आफैं दौडेर आइहाल्छे ।
एकदिन मिरा बाथरुममा नुहाइरहँदा छोरीले टाउकोको कानेटोपीले मुख छोपिछ । आत्तिदै रोइ । उसले हत्तपत्ति टोपी खोलेर केही नसोची बच्ची बोकी ।
“नरोउ नानू नरोउ” काखमा बोकेर फूल्याउन थाली । उसले आफूसगँ एकछिन टाँसेपछि बच्चीको रुवाइ बन्द भयो । बच्चीले उसको गाला छोइ, नाक समात्न खोजी, हात मुसारी आफूले लिन नहुने झल्यास्स सम्झे पनि उसले बोकिरही बच्चीलाई । एक्कासी चिसो हातले उसलाई धकेलेर बच्ची खोसिदा पो उ झस्की । मिराले आँखा तरेर हेरिरहेकी छ । ठूलो अपराधी सरह त्यस कोठाबाट बाहिर निक्की, आँखाबाट बगेको आँशुलाई वाहुलाको फेरले सरक्क पुछी ।
मिराको अफिस शुरु हुने भयो पर्सी देखि । को आउने, कसलाई ल्याउने आदि कुरा दिनँहु फोनमा भैरहन्थ्यो। उ पर्सीको प्रतीक्षामा थिई । बहिनी घरमा एक्दै हुँदा त मैले नै हेनुपर्छ यही सोचेर आनन्द मान्थी ।
गर्मीको समय तराइको माइती, छुट्ट िमिलाउन गाह्रो आदिले गर्दा मिरा जान नसकेपछि उसकी आमा आउने कुरा भयो ।
उमेश मोटरसाइकल लिएर सासूलिन वसर्पाक गयो । मिराकी आमा र मालिकको बीचमा बसेर उ जस्त्रै केटी आई । उसले आँगनमा कुचो लगाउँदै थिई । मालिकसँग एउटै मोटरसाइकलमा आउने पक्कै त्यो केटी आफन्त होली उसले सोची ।
“ऐ टाटे तेरो सामान पोको पार है, भोलि तँ तेरो घर जान्छेस् ।” भाँडा माझ्दै गरेका उसका हात मालिक्नीको बोलीले एकछिन रोकिए ।
किन के गल्ती भयो, के का लागि अनगिन्ती प्रश्को ओइरो एकैचोटी उसको सानो दिमागमा आयो तर बोली गलामा अड्कियो ।
“हामीले अर्की केटी पायौं तेरी आमालाई खबर गरिदिएको छ ।”
उसले बुझी उसको गल्ती उसको दाग भएको शरीर थियो ।
भर्‍याङ्गमुनीको कोठाबाट बाहिर पर्खालछेउ ट्वाइलेट जाँदा रातपरेपछि उ सँधै डराएर यताउति नहेरी भाग्थी तर आज उ डराइन । जुनेली रात थियो । उ पर्खालमा अडेस लागेर टाउको माथिको जुनलाइृ धेरै वेर हेरिरही । सायद सोचिरहेकीथिइ । तिमीमा पनि त दाग छ तिम्रो दागले शितलतामा कमी आएको छ र । त्यो रात भर उ वेला बेलामा व्युझिरही ।
एकाबिहानै आमाको सट्टा बाबु लिन आएछ ।
“ओ दागे हिँड छिटो” बाबु दागे भन्छ उसलाई ।
उसले बच्चीलाई एक पटक हेरी “तिमी ठूलो भएको देख्न पनि पाइन “मनमनै भनी । आँशु रोक्दा सिंगान बग्यो बाबुले आधा महिनाको चार सय खल्तीमा हाल्यो । ऊ थोत्रा लुगाको पोको बोकेर बाबुको पछाडी पछाडी लुरु लुरु हिडी ।
9 Comments on “कथा- दाग”
sabita bimali wrote on 16 March, 2013, 5:38
Ramro chha mam….
lok nathadhikari wrote on 16 March, 2013, 7:07
katha ramro lagyo ,chitran sajib chha.
Dipen wrote on 17 March, 2013, 14:51
atti sundar katha ramro laggo
smriti wrote on 18 March, 2013, 23:02
yo ta kasai ko life ma bhogiraakoo practical kura sambandhi chha !! aati nai ramro cha
Sushil Pokhrel wrote on 19 March, 2013, 11:48
साहित्यकार सरु पोखरेल का प्राय; सबै कथा हरु सरल र मर्म स्पर्शी हुन्छन ! मलाई कता कता पारिजात को याद आउछ , राम्रो छ ! नेपाली साहित्य मा नदेखिएको एउटा प्रतिभा !
sunil (india) wrote on 20 March, 2013, 12:34
मर्म स्पर्सी सत्य तथ्य कथा साह्रै नै राम्रो ।
ram lal wrote on 21 March, 2013, 9:11
ending sarai marmasparsi6hajur
RAJKUMAR POUDEL wrote on 23 March, 2013, 7:48
YO KATHA GARIBI ROGI LAI DHANI LE HERNE DISTRIKON KHADAL BHITRA SEROFERO MA RAHECHHA
bhim sen banjara wrote on 23 March, 2013, 8:01